प्रवास – Page5– Vishwanews.com : Popular Nepalese News Media in New York, USA
Home / News / प्रवास (page 5)
ढुकढुकीमा सुन्दरीजल सार्वजनिक
September 12, 2017 प्रवास 0
न्यूयोर्क । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) न्यूयोर्क च्याप्टरले साहित्यकार लक्ष्मी श्रेष्ठको कविता संग्रह ‘ढुकढुकीमा सुन्दरीजल’ लोकार्पण ग¥यो । ज्याक्सन हाइट्सस्थित शेर्पा किदुगको सभाकक्षमा सम्पन्न कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि महावाणिज्यदूत मधुकुमार मरासिनीले प्रवासमा सिर्जना गरिएको साहित्यले देशलाई नजिक महसुस गराएको बताए । साहित्यकार सकुन ज्ञवालीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको विशेष आतिथ्यता पुष्पराज …
एनआरएनए अध्यक्षका लागि तीव्र लबिङ
September 12, 2017 प्रवास, समाचार 0
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् आईसीसीको आगामी कार्यकाल (२०१७–२०१९)का लागि वर्तमान उपाध्यक्षद्वय भवन भट्ट र कुमार पन्त आआफ्नो अभियानमा जुटेका छन् । दुवै उपाध्यक्षले अहिले विभिन्न खालका आशंकाका बीच आफूलाई अनौपचारिक रुपमा अध्यक्षको उम्मेदवार घोषणा गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर लबिङ थालेका छन् । दुवै जनाका पक्ष–विपक्षमा गैरआवासीय …
बिपुल, प्रियंका, निमापछि सबिन राई र शिव परियारले तताउँदै छन् न्यूयोर्क
September 11, 2017 प्रवास, मनोरञ्जन, समाचार 0
न्यूयोर्क । हरेक सप्ताहन्त कुनै न कुनै कार्यक्रमले व्यस्त रहने न्यूयोर्कस्थित नेपाली डायस्पोरा सेप्टेम्बर १५ तारिख शुक्रबार साँझ गायक सबिन राई र शिव परियारको विशेष प्रस्तुतिमा झुम्ने भएको छ । न्यूयोर्कस्थित युवापुस्तामाझ चर्चित लछिन फाउण्डेशन, पीएनएम इन्टरटेनमेन्ट र लाइट्स आउट इन्टरटेनमेन्टको संयुक्त आयोजनामा सबिन राई र शिव परिवार लाइभ इन …
अब एनआरएन अमेरिकामा कुनै समूह छैन– डा. पौडेल
September 11, 2017 प्रवास, समाचार 0
१० सेप्टेम्बर, डलास (टेक्सस) । गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अमेरिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा. केशव पौडेलले अब एनआरएन अमेरिकामा कुनै समूह नरहेको बताएका छन् । उनले चुनावी प्रक्रियाका क्रममा भएका सबैं समूह अब एउटै साझा एनआरएनएभित्र समाहित भएको जनाएका छन् । ‘प्रजातान्त्रिक पद्दतीमा निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चुन्दा समूह बन्न …
सेप्टेम्वर १६ मा एनआरएनए अमेरिकाको साधारणसभा
१० सेप्टेम्बर, डलास । गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अमेरिकाको छैठौं साधारण सभा मेरिल्याण्ड डिसी क्षेत्रमा हुने भएको छ । संघ कार्यसमितिको आज बसेको बैठकले सेप्टेम्वर १६ मा मेरिल्याण्ड डिसी क्षेत्रमा साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको हो । साधारण सभा सम्पन्न गर्न संघकी उपाध्यक्ष रविना थापालाई संयोजक चयन …
एनआरएनए पोर्चुगलमा कार्की सर्वसम्मत
September 9, 2017 प्रवास, समाचार 0
भरत प्रधान लिस्बन, (पोर्चुगल), २३ भदौ । गैर आवासीय नेपाली संघ पोर्चुगलमा अध्यक्षसहीत अधिकांश पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । आसन्न छैठौं राष्ट्रिय अधिबेशन अन्र्तगत अधिकांश पदमा एकल उम्मेद्वार भएपछि अध्यक्ष सहीत अधिकांश पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । । अध्यक्षमा सुरुमा उम्मेद्वारी दिएका रोबोट लिम्वुले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएपछि संघको …
अमेरिकी एनआरएनमा पुनः डा. पौडेल निर्वाचित
September 8, 2017 प्रवास, समाचार 0
न्यूयोर्क । गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अमेरिकाको वर्ष २०१७ देखि २०१९ कार्यकालका लागि पुनः डा. केशव पौडेल निर्वाचित भएका छन् । गत ५ र ६ तारिख विद्युतीय प्रणालीमार्फत सम्पन्न निर्वाचनबाट अन्य २२ पदाधिकारीसहित डा. पौडेल अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको निर्वाचन समितिद्वारा जारी सूचनामा जनाइएको छ । डा. पौडेलको …
एनआरएनए युएसएमा मतदान सम्पन्न
September 7, 2017 प्रवास, समाचार 0
डलास । गैर आवासिय नेपाली संघ अमेरिकामा मतदान सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन समिितका अनुसार हिजो र आज गरी भएको मतदानमा ९ हजार २ सय ८२ मतदाताले भाग लिएका छन् । कुल मतदाता १४ हजार ५ सय २० रहेका िथए । पुर्ण विधुतीय माध्यम मार्फत मतदानको व्यवस्था िमलाईएको थियो ।
अरूकै लागि मरिमेट्ने राजन
September 6, 2017 प्रवास, समाचार 0
कल्पना घिमिरे / न्यूयोर्क ‘धेरै दुःख–कष्ट गरेर स्थापना गरेकाले होला म आफूलाई भन्दा बढी संस्थालाई माया गर्छु,’ आप्रवासी नेपालीको बाक्लो बस्ती ज्याक्सन हाइटमा भेट्नेबित्तिकै राजन विश्वकर्माले आफूले गर्दै आएको कामको बेलिबिस्तार लगाउन थालिन्, ‘भएको सबै सम्पत्ति संस्थालाई दिएर १७ वर्षदेखि त्यही संस्थामा आफैँ निरन्तर खटिएर यहाँसम्म ल्याएकी हुँ ।’ एक …
कलिउड बुझेका सुब्बा
September 6, 2017 प्रवास, मनोरञ्जन, समाचार 0
भन्छन्— लगानी होइन, बजार बढाऊ सुरज भण्डारी / टेक्सस उदय सुब्बा, नेपाली चलचित्र निर्देशक । यिनले नेपाली चलचित्रलाई नजिकबाट नियालेको पनि झण्डै २४ वर्ष पुगिसक्यो । रंगमञ्चमार्फत कलिउडमा निर्देशन यात्रा अघि बढाएका सुब्बा नेपालका सफल निर्देशकहरुमध्ये एक हुन् । २०५० सालदेखि चलचित्र निर्देशन थालेका सुब्बा नेपाली चलचित्र क्षेत्रका धेरै उतारचढावका …